တစ်နေ့တည်းမှာ စံချိန်တင် တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အင်းစိန်မြို့နယ်………. – Na Pann San
တစ်နေ့တည်းမှာ စံချိန်တင် တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အင်းစိန်မြို့နယ်……….
Na Pann San W | May 7, 2020 | Local News | No Comments
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၇-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
၁။ (၇-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ ပထမအသုတ်စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈၃) ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၀၂) ခု၊ စုစုပေါင်း (၁၈၅) ခုတွင် • COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၁၄) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။
၂။ သို့ဖြစ်ရာ (၇-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၁၇၆) ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် (၂) ကြိမ် ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့ရှိသူ (၁၂) ဦး (Case- 26, 46, 62, 63, 66, 69, 72, 79, 84, 118, 120, 132) ရှိသဖြင့် (၇-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ပိုးကင်းစင်လာသူ စုစုပေါင်း (၆၂) ဦးရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အနက် (၃၇) ဦးအား ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ သတ်မှတ်နေရာများတွင် အသွားအလာ ဆက်လက် ကန့်သတ်၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိပါသည်။
၅။ (၆-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၇-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီအတွင်း တွေ့ရှိရသော စောင့်ကြည့်လူနာအသစ် (၇၀) ဦး ရှိပါသည်။ Source;Ministry of Health and Sports, Myanmar
COVID-19 ရောဂါစောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ သတငျးထုတျပွနျခွငျး(၇-၅-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
၁။ (၇-၅-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ ညနပေိုငျးတှငျ အမြိုးသားကနျြးမာရေးဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန (ရနျကုနျ) မှ ပထမအသုတျစဈဆေးပွီးစီးခဲ့သော ဓာတျခှဲနမူနာ (၈၃) ခု၊ ဆေးသုတသေနဦးစီးဌာနမှ စဈဆေးပွီးစီးခဲ့သော ဓာတျခှဲနမူနာ (၁၀၂) ခု၊ စုစုပေါငျး (၁၈၅) ခုတှငျ • COVID-19 ရောဂါ ဓာတျခှဲအတညျပွု လူနာသဈ (၁၄) ဦး တှရှေိ့ရပါသညျ။
၂။ သို့ဖွဈရာ (၇-၅-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မွနျမာနိုငျငံတှငျ COVID-19 ရောဂါဓာတျခှဲ အတညျပွုလူနာ (၁၇၆) ဦးရှိပွီဖွဈပါသညျ။
၃။ ဓာတျခှဲအတညျပွု လူနာဟောငျး (old confirmed case) မြား၏ ဓာတျခှဲနမူနာမြားတှငျ (၂) ကွိမျ ဆကျတိုကျ ပိုးမတှရှေိ့သူ (၁၂) ဦး (Case- 26, 46, 62, 63, 66, 69, 72, 79, 84, 118, 120, 132) ရှိသဖွငျ့ (၇-၅-၂၀၂၀) ရကျနအေ့ထိ ပိုးကငျးစငျလာသူ စုစုပေါငျး (၆၂) ဦးရှိပါသညျ။ ၎င်းငျးတို့အနကျ (၃၇) ဦးအား ဆေးရုံမှဆငျးခှငျ့ပွုခဲ့ပွီးဖွဈကာ သတျမှတျနရောမြားတှငျ အသှားအလာ ဆကျလကျ ကနျ့သတျ၍ စောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုလကျြရှိပါသညျ။
၅။ (၆-၅-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ နလေ့ယျ (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၇-၅-၂၀၂၀)ရကျနေ့၊ နလေ့ယျ (၁၂:၀၀) နာရီအတှငျး တှရှေိ့ရသော စောငျ့ကွညျ့လူနာအသဈ (၇၀) ဦး ရှိပါသညျ။ Source;Ministry of Health and Sports, Myanmar
အမေရိကန် နဲ့ တရုတ် စစ်ဖြစ် နိုင်သလား…” ပါဝါ နဲ့ အာဏာ ကမ္ဘာလုပွဲ (သို့) တရုတ် ဦးချိုးပွဲ “
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရဲ့ အဓိက တရားခံများ ( သို့ ) မြန်မာပြည်သူတွေ ရင်ထဲက ကမ္ဘာမကြေတဲ့ သမိုင်းတရားခံများ
ရန်ကုန် လေဆိပ်ကနေ “ Q ” မဝင်ဘဲ အိမ်တန်းပြန် ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသား ( ၆ ) ယောက် အရှုပ်တော် ပုံ ( အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စမလို့ လူအများ သိအောင် Share ခြင်းဖြင့် ကူညီပါ )
စမ်းသပ်ခ ငွေ ၁၉၀၀၀ ယူပြီး လူနာ ကို အရှက် ခွဲတဲ့ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ..